Miha-mananosarotra Ny Sivana Ao Angola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2012 12:17 GMT
Ny Alahady 11 Novambra teo no nankalaza ny faha-37 taonan'ny nahazoany fahaleovantena [fiteny portioge] i Angola. Saingy raha ny tena marina, mba hatraiza moa izay fahaleovantenan'ny firenena izay amin'izao anio izao? Raha resaka fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, ohatra, mampahatahotra ny zava-misy, ary araka ny ambaran'ireo manampahaizana manokana, lasa tena mananosarotra ny resaka sivana eto Angola.
Ny andiany faran'izay akaiky tamin'ny sivana dia nitranga tamin'ny 27 oktobra 2012, rehefa nosintonin'ny Media Investe tsy ho azo atonta ny Semanário Angolense [pt]. Araka ny filazan'i Maka Angola [pt], ny antony dia ny famoahany saika amin'ny endriny manontolo ny kabary feno fanakianana nataon'ny filohan'ny UNITA, Isaías Samakuva, mikasika ny toerana misy ny firenena ankehitrio :
Ny orinasa tompony, izay fehezin'ireo olona ambony avy amin'ny Sampan-draharaham-panjakana momba ny Filaminana sy ny Fampahalalam-baovao [Serviços de Segurança e Informação do Estado (SINSE)], dia nisintona ireo gazety vita printy ary nandoro azy ireny. Maka Angola dia nahazo dika niomerika tamin'ilay gazety niharan'ny sivana, izay ny pejy faha-8, 9 sy 10 dia mamerina ny kabarin’ Samakuva tamin'ny 23 oktobra.
Dika mitovin'ny pejy voalohan'ilay gazety voasivana, Semanário Angolense. Ilay kabary nataon'i Samakuva tamin'ny 23 oktobra dia naverina tao amin'ny pejy faha-8, 9 sy 10.
Ny kabarin'ilay filohan'ny antoko angole mpanohitra lehibe indrindra – izay navoakan'i Maka Angola ety anaty aterineto ny dikany manontolo [pdf pt] – dia nanakiana ny tsy fisian'ny adihevitra momba ny toerana misy ny firenena nataon'i José Eduardo dos Santos, filohan'i Angola, nandritra ny fanokafana ny fotoam-pitsarana fahatelo, araka izay nofaritan'ny lalam-panorenana.
Raha tokony ho izany no izy, ny filoham-panjakana Angole dia nibaiko mba hitsinjarana amin'ireo solombavambahoaka ny dika mitovin'ny kabariny tamin'ny fotoam-panokanana azy ny 26 septambra lasa teo. Nokianin'ny mpanohitra mafy tokoa , ary ireo sehatra maro tamin'ny fiarahamonina, io fihetsiny io.
Tao anaty tafatafa nivoaka teo amin'ny tranonkalan'ny radio alemana Deutsche Welle [pt], ilay angole mpiaro ny zon'olombelona, Rafael Marques, mpanorina ny Maka Angola, dia niteny fa “endrika iray fanampiny amin'ny fanaraha-maso ny vaovao mivezivezy eto amin'ny firenena io” :
Kabary tena mafonja be no nataon'ny filohan'ny UNITA, izay nahazo fankasitrahana goavana avy amin'ny mpiray tanindrazana(…). Izay no antony nanaovana izay hahazoana antoka ny tsy hielezan'ilay kabarin'i Isaías Samakuva bebe kokoa. Izy ity dia ety anaty aterineto ihany no mivezivezy, ary, araka ny efa ahalalàna azy tsara rahateo, Loandà sy ny ambiny eto amin'ny firenena dia mizaka olana henjana amin'ny resaka famatsiana herinaratra. Vokatr'izay, vitsy ny olona afaka mikirakira aterineto ka ny gazety no vakiana betsaka kokoa, satria ny gazety iray dia azon'olona maro vakiana mifandimby. Ankehitriny koa ireo gazetin'olon-tsotra dia arahan'ireo sampana mpiadidy ny resa-piarovana maso akaiky ary amin'izay fotoana izay, misy ny tsy fahalavorariana avy amin'ireo mpanivana, kanefa na eo aza izany, manana fotoana ry zareo handehanana mijery ifotony ireo gazety any amin'ny trano printy mba handoroana azy ireny.
Ao amin'ny tranonkalany, ny Sendikan'ireo Angole Mpanao Gazety [Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA)] [pt] dia mitaraina fa tsy zava-baovao ireo “tranga” toy iny nisy iny raha eo amin'ny tontolon'ny “fahalalahana manao gazety” ao Angola :
Io karazana fanohintohinana io dia nanomboka nitranga tamin'io fotoana io, roa taona mahery lasa izay, rehefa nanomboka novidianà orinasa tsy mitonona anarana ireo gazety mpiseho isan-kerinandro ao Loanda. “Semanário Angolense”, “A Capital” ary “Novo Jornal” dia samy niova tompo tao anatin'io vanim-potoana io. Eo amin'ny lafiny famoahan-dahatsoratra, “A Capital” no famoahana nizaka herisetra /sivana betsaka indrindra hatreto avy amin'ireo tompony vaovao, noho ny antony politika mazava loatra ary mifamatotra amin'ny fandraisany toerana amin'ny resaka sasantsasany manelingelina ny tombontsoan'ny mpitondra ankehitriny.
Ny raharaha Semanário Angolense dia niteraka fanehoan-kevitra marobe tety anaty tambajotra sosialy. Ny 29 Oktobra 2012, Joana Clementina nanamarika tao amin'ny Facebook [pt] hoe:
Inona daholo no anton'izao tabataba be izao e ? Manan-tompo io gazety mpiseho isan-kerinandro io ka azy ny fanapahan-kevitra mikasika izay hivoaka eny an-dalambe eny. Raha ny kabarin'i man samas [Isaías Samakuva] no olana, mbola afaka mandefa izay tiany ny Rádio Despertar, ary dia holazaina fa ny Despertar no manana mpihaino be indrindra amin'ny vahoaka Angole. Tsy misy resaka fifampiraharahàna avo lenta izany. Ho faly tokoa aho raha mba hahitanareo vahaolana ny olan'ny jiro sy rano. Tsy ny olom-pirenena tsotra ihany koa no afaka hanao ny Semanário Angolense any am-paosiny (hividy azy). Olona vitsy an'isa no mamaky azy io.
Fotoana fohy taorian'izay, Mingiedy Mia Loa dia namaly mivantana an'io fanamarihana io :
Joana Clementina : tsy misy idiran'ny tompony, misy ny Filankevi-pirenena momba ny Fifandraisana Sosialy [Conselho Nacional de Comunicação Social] ary anjarany ny mandrindra sy manara-maso ny matoan-dahatsoratr'ireo sampana mpanao fifandraisana sosialy, na an'olon-tsotra izy na am-panjakana, ary amin'ny lafiny iray, ny Lalam-panorenan'i Angola tsy miresaka mihitsy ny sivana an-gazety ao amin'ny andinin-dalàna momba ny fahalalahana maneho hevitra
Ny 31 Oktobra 2012, Maurilio Luiele dia nanoratra ihany koa tao amin'ny Facebook [pt] :
Ny zava-misy dia hoe miaro ny fahalalahana manao gazety ny Lalam-panorenana ary amin'izany dia mandràra ny sivana. Raha tsy izany ary no atao hoe sivana, dia inona no ilazana azy? Ny fanitsakitsahana ny Lalam-panorenana izao no resaka, ary, ratsy kokoa aza, ny fanohintohinana ankitsirano sy tsy amin'antony ny lalàna aty Angola. Mandrakariva dia manontany ity manaraka ity foana aho hoe : raha tsy arofanina ny lalàna ary ny didiko fe-lehibe no manjaka, dia aiza no toeran'ny Fanjakana Demaokratika tàn-dalàna? Aiza ny PGR hiaro ny ara-dalàna ?
Araka ny itateran'ny SJA, [sendikan'ireo Angole mpanao gazety], izay mitanisa ny lalàna manan-kery (7/06/15 tamin'ny May), ireo fanohintohinana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety dia nivandravandra hatreo fa :
Ny olona izay, ivelan'ny tranga voafaritry ny lalàna, manakana na manelingelina ny fanoratana, ny fanontàna, ny fitsinjaràna ary ny fivezivezena malalak'ireo asa printy manara-potoana, manakana na manelingelina ny fandaharana amin'ny radio sy fahitalavitra, maka na manimba ireo fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa fanaovan-gazety.
“Tsy tokony hohajaina ve ny fahalalahan'ny tsirairay ?” [pt] hoy ihany koa ilay mpanao gazety, Eugénio Costa Almeida, manontany ao anaty lahatsoratra iray fanehoam-pijery mikasika io lohahevitra io, nivoaka tao amin'ny gazety Angole mpiseho isan-kerinandro Novo Jornal, ny 2 novambra 2012 :
Raha voamarina io fihetsika io, dia noporofoin-dry zareo fa tsy manaja ny fahalalahan'ny tsirairay izy ireo. Ny fahalalahan'ilay manoratra, ny fahalalahan'ilay namokatra ary, ny ratsy indrindra satria izy no miantoka iretsy teo alohany, ny fahalalahan'ny mpamaky hanan-tsafidy. Satria tsy misy tsotra izao ny gazety sy ny fampahalalam-baovao raha tsy misy ny mpamaky, ny mpihaino sy ireo mpijery fahitalavitra, mamaky na mihaino ireo vaovao sy fanehoana fomba fijery mba hankasitrahany azy aty aoriana, hitanisàny azy, hametrahany fanontaniana momba azy, hitsikerany azy ao anaty fahalalahana tanteraka, ary hisintonana izay mety ho tsoakevitra rehetra azo tsoahana avy amin'izany.
“Samakuva: aiza ny kabariko?” Sary an'ny Tetikasa Kissonde nozaraina tao amin'ny Facebook
Ireo andiany tahaka ity no porofo fa manomboka maka sehatra hafa mihitsy ny sivana eto Angola, miaraka amin'ny fampielezan-kevitra sy ny fanivànan-tena izay mametra misimisy kokoa isak'izay mandeha ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety. Ny lasitra sivana Angole dia mbola mananosarotra kokoa noho ny an'ny Shinoa”, hoy ilay angole mpandalina, Nelson Pestana tao anaty tafatafa iray ho an'ny Deutsche Welle [pt]:
Ny lasitra sivana Shinoa dia raisina/ekena ho toy ny iray amin'ireo rafitra ao anatin'ny antoko rahateo. Tsy izany aty Angola. Ny kabary ho faneken'ny vahoaka dia mandalo amin'ny hevitra momba ny demaokrasia, amin'ny hamaroan'isa. Tsy rantsana ivelany izay manakana ny gazety tsy hivezivezy, Ny tompon'ny gazety manokana no manapa-kevitra hoe amin'ity indray mandeha ity dia tsy apartika aloha ity. Ny tompony dia ao anaty tariky ny fitondràna, ary noho io, dia isan'ny singa iray amin'ny rafitry ny fanivànana sy ny fanaraha-maso ny fomba fijerin'ny firenena iray manontolo.
“Tsy misy na iray aza amin'ireo firenena afrikana mampiasa ny portioge ho teny ofisialy [PALOP-Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] no afaka hihambo ho manana ny hery hanaovana tsindry toa an'i Angola”, hoy sahady ny fanakianan'ilay portioge mpanao gazety, Pedro Rosa Mendes tao anaty tafatafa iray natao tamin'ny Febroary2012, fotoana fohy taorian'ny nampiatoana ilay fandaharana anaty fampielezampeo isan'ny novoiziny (“Este Tempo”, averina alefa ao amin'ny Antena 1) noho ny fandalinana iray nanakiana ny governemanta angole :
Mivandravandra be izany, ho an'ireo tsy te-hametraka ny tenany ho nàndra velona, fa dia efa mihodina tsara ny ampahany goavana amin'ny tsindry azon'ny governemanta atao. Karazana diplaomasia anjorony io, ary tsindry tsy ambara mivantana.